Waraysi Madaxweyne Gaas: “Waa Mid ka Baaraandeg u Baahan Dhaqangelinta Qodobada Shirka London” (dhegayso) – Radio Daljir
Maajo 12, 2017 2:42 b 5
London – Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ oo ka mid ahaa madaxda Soomaalida ee ka qaybgalay shirkii looga hadlayey arrimaha Soomaaliya ee ka dhacay magaalada London dalka Ingiriiska ayaa caawa markii shirkaasi uu soo xirmay wareysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir.
Madaxweyne Gaas ayaa wareysigaasi uga hadlay arrimo badan oo la xiriira qaddiyadihii quseeyey Soomaaliya ee shirkaasi looga hadlay, qaabkii loo maamusay shirka ama loo weyneeyey meekhaamkiisa iyo heerkiisa ka qaybgal ee beesha, natiijada ka soo baxday iyo arrimo kale oo ku saabsan meelmarinteeda iyo doorarka gudaha iyo dibeddu waxa ay noqon doonaan.
“Haddii aan nahay madaxdii matalaysay Soomaaliya, waxaannu muujinnay mowqif mid ah, waxaannu muujinnay in aannu midaysannahay, nahayna hal dal iyo hal dawlad, hal waddana aan ku wada soconno” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayey Radio Daljir.
Gaas waxaa kale oo uu sheegay ka baaraandeg weyn in ay u baahantahay habkii iyo hannaankii loo hirgalin lahaa arrimaha lagu meeleeyey shirka London, isagoo ku celceliyey lagama maarmaan in ay tahay hareeraha in ay isla qabtaan dawladda federaalka, dawladaha xubnaha ka ah federaalka iyo beesha caalamkuba, si aysan u dhicisoomin qodobada shirkaan ka soo baxay.
Dhinaca kale, Madaxweyne Gaas waxaa uu tilmaamay rajadu maanta in ay ka duwan tahay sidii hore, laguna hanweyn yahay in ay taabba-qaadan qodobada shirkaan ka soo baxay, siiba dib-u-dhiska ciidanka Qaran oo Soomaaliya ay yeelato iyo habkii dawladda Soomaaliya ay u hanan lahayd ammaankii dalka.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 490 Wararka 23978
maasha alaah madax weyne
fartuun jamal 4 years ago
shirk London waa guul usoo hoyatay somalid waa hadii ay kafa iidaysatan inkasato ayka goantay madxadeen lakin waa jirah istakulayan laan somalid udhaysa ee ha iskutashato somali waxan leyahay beesha calamunku mar walab waxy sheegan ama balan qadan wax ayan siinayan dadk somaliyed badacn mar walba waxan
maqalan ah balqadayo been ah waayo ma bixiyan waxy sheegan tasan waa tan dhalis fa shilk kuyimad shirark ay uqabtan somalid
waa aragtiiday mahdsniinin radio dalajir
cabdiqaadir caduur 4 years ago
wan sodhoweyneynaa shirkii kadhcay Landon wixii kasobxayna wankufarax nay wanaladhaqangalindona insha Alla
cabdiqaadir 4 years ago
waa wax lagufrxo in aymadaxdii somalidu isku si uwajhan qodabadi shirka